Ny morontsiraka tsara indrindra any Chiclana: La Barrosa, Playa del Puerco ary Sancti Petri | Vaovao momba ny dia
Lola curiel | | Tanànan'ny Espana, tora-pasika
Naorin'ny Fenisianina tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'ny atsimon'i Cádiz dia i Chiclana no jerena iray amin'ireo tanàna tranainy indrindras amin'ny faritany. Tamin'ny 1303, Fernando IV dia nanome ny tanin'i Chiclana ho an'ny tranon'i Medina Sidonia, manokana ho an'i Alonso Pérez de Guzman, ary dia toy izany no nananganana ny tanàna ankehitriny. Ny famindrana ireo manan-kaja sy ny fipoahana izay nentin'ny fanjanahan'i Amerika niaraka taminy, dia niafara tamin'ny famerenana azy io ary nitarika ny fisehoany lehibe.
Androany, mandray ny mpizahatany marobe i Chiclana, nasionaly sy iraisam-pirenena, izay nahasarika ny toetrandro sy ny harena voajanahary amin'ny faritra. Ary io dia, amin'ny 203 kmXNUMX izay fehezin'ny fe-potoana monisipaly, dia ny ampahatelony dia ampahan'ny National Park of the Bay of Cádiz. Ny moron-dranomasina, kilometatra vitsivitsy miala ny tanàn-dehibe, dia iray amin'ireo fitakiana lehibe mpizahatany tanàna amoron-dranomasina. Mba tsy hanadinoanao ny fotoana mety hankafizanao ny fialan-tsasatrao eo amin'ny fasika Chiclana, Holazaiko aminao amin'ity lahatsoratra ity izay morontsiraka tsara indrindra.
3.1 Ny Castle ny Sancti Petri
Na eo aza ny toerana misy azy an-tanàn-dehibe, ny kalitao sy ny fitehirizana ity morontsiraka ity dia miavaka. Raha ny marina dia manana mari-pahaizana momba ny tontolo iainana toy ny Blue Flag, manokana ho an'ny morontsiraka sy seranan-tsambo izy ary manaraka ny ISO 14001, fenitra iraisampirenena momba ny fitantanana tontolo iainana.
Su fidirana mora ary ny sakan'ny morontsiraka, sahabo ho 60 metatra ny sakany, dia ataovy a safidy tonga lafatra ho an'ireo mpizahatany mitady morontsiraka mahafinaritra, izay azon'ny fiara sy amin'ny alàlan'ny karazana fotodrafitrasa maro karazana, tsy mila miala amin'ny rano madio sy ny hatsarana voajanahary amin'ny morontsiraka Cadiz.
Na dia efa fahafinaretana aza ny mandry hipetraka amin'ny fasika volamena mamy ao aminy, dia i La Barrosa koa manana tolotra mahaliana ho an'ireo mpizahatany mazoto indrindra izy io. Misy ny sekoly surf sy kitesurf izay manolotra fampianarana ary manana serivisy fanofana fitaovana fanatanjahan-tena. Voalamina ihany koa ny hetsika izay ahafahanao mankafy ny tontolo mandritra ny fotoana ialanao fotoana mahafinaritra sy mahafinaritra ivon-toerana mitaingina soavaly mitaingina soavaly manamorona ny morontsiraka.
Raha mpitsangatsangana sy bara amoron-dranomasina ianao, dia afaka misotro zava-pisotro mangatsiaka vitsivitsy na labiera any amin'ny morontsirak'i Mojama na any Albarrosa, eo amin'ny fasika no misy ny toerana roa ary, ankoatra ny rivo-piainana tena tsara dia manome izy ireo sakafo mahafinaritra. Amin'ny ny promenade dia hahita safidy gastronomic hafa ianao, trano fisakafoanana misy terraces lehibe mety tsara hijerena ny filentehan'ny masoandro. Aza miala tsy manandrana ny trondro nendasina, lovia mahazatra an'ny faritra amoron-tsirak'i Mediterane.
Eo anelanelan'ny Novo Sancti Petri sy ny urbanisation Roche Manitatra ny torapasika El Puerco. Avy amin'ny tilikambo ny anarany izay mijoro eo amin'ny tehezan'ity morontsiraka ity ary anisan'ny rafitry ny tilikambo fiambenana amoron-dranomasina izay nasain'i Felipe II naorina tamin'ny taonjato faha-1811. Niorina tamin'ny fitaovan'ny Romanina ity trano fiambenana ity ka nanatri-maso ny Battle of Chiclana, fikomiana nataon'ny miaramila tamin'ny XNUMX teo akaiky teo, tao anatin'ny Ady Fahaleovan-tena Espaniola. Taona maro taty aoriana dia nampiasaina izy io mba hifehezana ny fandalovan'ny tunas, satria i Chiclana dia faritra misy hetsika avo Almadrabera. Amin'izao fotoana izao ny tilikambo dia manana lampihazo eo an-tongony izay miasa toy ny fiambenana.
Ao amin'ny Playa del Puerco koa tobin'ny mpiambina sivily taloha tamin'ny taonjato faha-XNUMX no voatahiry. Ilay trano, izay nilaozana efa ela, dia nohavaozina ary tamin'ny fahavaratra lasa Grupo Azotea nanokatra ny Cuartel del Mar teo, trano fisakafoanana manavao izay manararaotra ity toerana manokana ity ho mariky ny maha izy azy ary manolotra ny mpanjifany menio tsy azo resena ao amin'ny toerana iray misy tombontsoa indrindra ny faritra.
Ny morontsiraka dia mitovy amin'ny La Barrosa, miaraka fasika volamena sy rano madio, na dia misy aza faritra maitso bebe kokoa, dongona sy hantsam-bato manome azy a fisehoana voajanahary kokoa ary manintona ho an'ireo izay mitady tontolo somary mitokana kokoa amin'ny tanàn-dehibe.
Es iray amin'ireo morontsiraka fanta-daza indrindra amin'ny faritra. Indraindray, rehefa ambany dia ambany ny onja, dia azo aleha amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana avy any La Barrosa. Sancti Petri Beach dia mizara roa, un virijina voalohany misy sanda ekolojika ambony ary a tongotra faharoa miitatra hatrany amin'ny rano malaky ka hatramin'ny taloha tanàna fanjonoana an'i Sancti Petri. Niorina ny tanàna noho ny toeram-ponenan'ireo mpanjono mpandrika izay nanamafy ity faritany Chiclana ity, orinasa iray tena izy mifototra amin'ny fiarovana ny jono sy ny tuna.
Sancti Petri dia saika tsy nonenana tamin'ny 1973, saingy eo am-pamerenana amin'ny laoniny izao ary lasa a toerana mahaliana ny mpizahatany ho an'ireo mitsidika ny morontsirak'i Cadiz. Ireo trano fisakafoanana hita ao an-tanàna dia manolotra vokatra vaovao avy any an-dranomasina, lasa a toerana mety hankafizanao ny sakafo mahazatra an'ny Cádiz. Windsurfing sekoly, sambo sy ny orinasa izay mandrindra hetsika nautika Nifindra tany amin'ilay faritra izy ireo, nanintona ny harena voajanahary.
Ny Castle ny Sancti Petri
Avy amin'ny moron-dranomasina ianao dia afaka mahita ny Castle of Sancti Petri, efa an'ny tanànan'i San Fernando, fa izay heverina ho Simbolo chiclana. Ny trano mimanda dia miorina eo amin'ny nosy kely ary mankany ianao dia mila manao izany fitetezana. Mba hanamorana ny fidiran'ny mpizahatany dia namboarina ny tranofiara. Misy fitsangatsanganana kayak miainga avy any Punta del Boquerón ary koa avy ao amin'ny tanàna ary izany tMankany amin'ny nosy kely izy ireo mba hahafahanao mitsidika ny trano mimanda.
Ny turret no ampahany tranainy indrindra amin'ny trano mimanda, namboarin'ny amiraly Benedetto Zacarías tamin'ny taonjato faha-XNUMX nandritra ny fahazoana an'i Cádiz. Taty aoriana, tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo, ny ambiny dia natsangana ary niasa ho teboka miaramila stratejika nandritra ny Adin'ny Fahaleovan-tena, ary niasa tamina fotoana manokana ho fonja ho an'ireo gadra politika tamin'izany fotoana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Ny morontsiraka tsara indrindra any Chiclana: La Barrosa, Playa del Puerco ary Sancti Petri